Ka bilow 28 abriil waxaa Nederland laga dul qaaday bandowga habeenka
Ka bilow 28 abriil waxaa Nederland laga dul qaaday bandowga habeenka.
Read more about Ka bilow 28 abriil waxaa Nederland laga dul qaaday bandowga habeenka
Su’aalaha inta badan la’iska weeydiiyo tallaalka ka hortagga korona fiiruska
1.Yaa tallaalka korona fiiruska loo soo bandhigayaa?
Qof kasta oo Nederland jooga oo 18 sano jir ah ama ka weyn waxaa loo soo bandhigayaa tallaalka. Waxana taasi ka heleysaa casumaad. Balse dadka oo dhan isku kol ma aha. Isla markiiba lama haayo tallaal dadka oo dhan wada gaara.
2. Sidee tallaalista loo kala hormarinayaa?
Read more about Su’aalaha inta badan la’iska weeydiiyo tallaalka ka hortagga korona fiiruska
Coronavaccinaties: veelgestelde vragen en antwoorden
Read more about Coronavaccinaties: veelgestelde vragen en antwoorden
Tallaalka Korona: su’aalaha inta badan la’is weydiiyo iyo jawaabtooda
Bisha jannaayo 2021 waxaa Nederland ka bilowday ka tallaalista korona. Tallaalistan waxaa loogu tala galay muwaadiniinta Nederland oo dhan 18 sano jir iyo inta ka weyn. Waxaad halkan ka heleysaa jawaabaha oo dhan oo su’aalaha inta badan la’is weydiiyo. Ma ku jirto miyaa jawaabta su’aashaada? La xiriir markaa infobalie ama shaqaalaha-COA.
Innaga oo www.mycoa.nl adeegsaneyna waxaa aan kula socodsiin donna isbedellada ugu dambeeyay. Marka la soo gaaro wakhtigaada tallaalka, innaga ayaa kula soo socodsii donna.
Read more about Tallaalka Korona: su’aalaha inta badan la’is weydiiyo iyo jawaabtooda
Sharciga deeqda xubnaha ee Nederland
Nederland qof kasta oo 18sano jir ah ama ka weyn wuxuu ku yaal Diwaanka Xubin ku Deeqaha. Kaasi waa diiwaan ay ku taal in qofka uu ku deeqe xubnaha yahay ama uusan ahayn. Ku deeqe xubin waa qof geeridiisa keddib ugu deeqay xubnihiisa qof kale oo jirran. Sidaasi ayuu ku deeqaha xubnaha ku badbaadin karaa qof kale naftiisa.
Read more about Sharciga deeqda xubnaha ee Nederland
Kharshkee safarrada ayaa la magdhabaa?
Haddii aad is xaadirinta qasabka ah, iyo ballamada qasabka ah ee COA, ee ka qeyb qaadashada brograamyaasha, wadahadallada Takecarebnb, ama daryeel caafimaad awgii ay tahay in aad soo booqato xaruunta, COA waa magdhabeeysa kharashka safarka ee gaadiidka dadweeynaha. Masaafada safarka waa in ay markaa ugu yaraan dhan tahay toban kilomeeter. Haddii safar fadhi oo qof xanuunsan laga maarmaan yahay, waxaa taasi lagala xiriirayaa GZA Praktijklijn-ka.
Read more about Kharshkee safarrada ayaa la magdhabaa?
Ballamada xafiiska la talinta iyo JGZ
Haddii aad carruur leedahay ka da' yar afar sano jir, waxa aad un adeegsan kartaa xafiiska la talinta (carruurta) ee xaruunta aad degganeyd ama maamul ahaan kan laguu beddelay. Galka ilmahaad halkaasi oo keli ah ayaa laga heli karaa. Haddii aad imaan karin waa in aad xiriir la soo sameysaa xafiiska la talinta si aad ballanta dib ugu dhigato. Ma ku sugan tahay isla dowladda hoose oo aad dooneyso in aad ku yeelato xeerka la jiifashada mana leedahy carruur da'dooda afar jir tahay amaba ka weeyn, markaa xitaa kuwaasi waxa ay adeegsan karaan isla xeer nidaameedkaa.
Read more about Ballamada xafiiska la talinta iyo JGZ
Maxaad yeeleysaa haddii aad dhakhtarka ilkaha u baahato?
Daryeelka dhakhtarka ilkaha waxa un la magdhabaa haddii aad leedahay dhibaato daran oo wax calaajista- ama xanuun daran. Marka aad ballan ka dhiganeyso dhakhtarka ilkaha waxaad la xiriireysaa GZA Praktijklijn, telefoonnummer: 088-1122112. Shaqaalaha waxa uu ballan kaaga sameynayaa dhakhtarka ilkaha oo markaa wakhti haaya. .
Read more about Maxaad yeeleysaa haddii aad dhakhtarka ilkaha u baahato?
Maxaad yeeleysa marka aad dhibaatooyin caafimaad yeelato?
Haddii aad dhibaatooyin caafimaad yeelato waxaad la xiriir kartaa dhakharka qooyska oo aad kula ballantay in si ku meelgaar ah uu daryeelkaada caafimaad ula wareego. Ku dadaal in xiriir kasta oo aad la yeelaneyso daryeel bixiyayaasha aad sidato kaarkaada daryeelka, aqoonsigaada, iyo warqadda 'Warbixinta daryeel bixiyayaasha'.
Read more about Maxaad yeeleysa marka aad dhibaatooyin caafimaad yeelato?